﻿﻿	Implant | Find My Method
မည်သူမျှ အချောင်းများ (သို့)အတောင့်များကို မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်၍၊ တာရှည်ခံပြီး အရင်အတိုင်းပြန်ရနိုင်သည်။
ထိရောက်မှု – implant သည်အထိရောက်ဆုံးသော နည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသောအမျိုးသမီး ၁၀၀ လျှင် ၉၉ ယောက်သည် ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး – ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်းသည် implant၏ အဖြစ်အများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်
အားထုတ်ရမှု- နိမ့်။ လျင်မြန်စွာသွင်းထားနိုင်ပြီး ၃နှစ် – ၅ နှစ် ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ပေးသော Nexplanon အကျဉ်းချုပ်
implantများသည် အမျိုးသမီးလက်မောင်းအရေပြားအောက်တွင် ထည့်ထားသော ပလတ်စတစ်ချောင်းများ (သို့) အတောင့်များဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည် အရမ်းသေးငယ်၍ ထည့်ပြီးသည်နှင့် လူအများစုက မမြင်နိုင်ပါ။ implant ဟာ မျိုးဥအိမ်မှ မျိုးဥထွက်မှုကို တားပေးပြီး သားအိမ်ဝအချွဲများထူထဲစေသော progestinခေါ် ဟိုမုန်းတမျိုးကို ထုတ်ပေးတယ်။ ၄င်းအားဖြင့် သုတ်ပိုးကိုမျိုးဥဆီမရောက်အောင်တားဆီးထားပေးတယ်။ သင်ရွေးချယ်သောအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကိုယ်ဝန်ကို ၅ နှစ်အထိကာကွယ်ပေးသည်။ Nexplanon, Jadelle နှင့် Levoplant အပါအ၀င် အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများရှိသည်။
သုံးပြီး မေ့ထားလိုက်နိုင်၏။ သန္ဓေတားနည်းကိုမှတ်မထားလိုပါက implant သည်သာ သင့်ရွေးချယ်ခွင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထဲ့ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် မည်သည့်implantအမျိုးအစား အသုံးပြုသည်ကို မူတည်၍ ၃-၅ နှစ်ကြာသည်။
လက်သုံးရန်မလို။ ဆေးဆိုင်သို့သွားယူရန် အထုပ်များ သို့မဟုတ် ဆေးညွှန်းများမရှိပါ။ ပျောက်ဆုံးသွားစရာ မေ့လျော့သွားစရာမရှိပါ။
လုံးဝ မသိနိုင်။ သင်implantရှိထားကြောင်း မည်သူမှမပြောနိုင်ပါ။ ထုပ်ပိုးထားစရာ၊ လိင်မဆက်ဆံခင်လေးတွင် လုပ်စရာ ဘာမှမလို။
ကိုယ်ဝန်အတွက်မေးစရာ။ implant ဖယ်ရှားပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်မဆို သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သင့်သည်။ implant ဖယ်ရှားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်မရချင်ပါက အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ချက်ချင်းကာကွယ်ပါ။
ရရှိနိုင်မှု။ သင် ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးချင်ပါသလား? ဤနည်းလမ်းကို နေရာများစွာတွင် ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သောနိုင်ငံများတွင်အမျိုးအစားအားလုံးကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်“ ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ရှိနည်းလမ်းများ” အပိုင်းကိုလေ့လာပါ။
implant ထည့်ပြီးတာနဲ့ သင် ဘာမှ လုပ်ရန်မလိုပါ။ implantသည်သင်၏အရေပြားအောက်တွင်ရှိနေပြီး အသုံးပြုထားသောအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကိုယ်ဝန်မှ ၃ – ၅ နှစ်အထိကာကွယ်ပေးသည်။.
implant ထည့်ခြင်း: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် သင်၏ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးသင့်အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက် သင်၏လက်မောင်းနေရာအနည်းငယ်ကို ထုံဆေးဖြင့် အသုံးပြုပြီး အရေပြားအောက်သို့ အချောင်း(သို့)ဆေးတောင့်များကိုထည့်သွင်းပါမည်။ ဒါပါပဲ 
သင်၏ရာသီကာလ၏ပထမငါးရက်အတွင်း implantကို ထဲ့ခဲ့ပါက သင်ကို ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန်မှကာကွယ်ထားသည်။ အကယ်၍ ထိုပထမငါးရက်နောက်မှ ထဲ့ခဲ့ပါက နောက်အပတ်အတွက် နည်းလမ်းအပိုကိုအသုံးပြုရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးများ ၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးများ၊ diaphragmအမြှေးပြား ၊ ရေမြှုပ် (သို့) အရေးပေါ်တားဆေးသုံးခြင်း။ 
implant ကိုထုတ်ရန်အချိန်တွင် သင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် သင်၏လက်မောင်းအရေပြားကိုထုံဆေးဖြင့် အနည်းငယ်ဖေါက်၍ implantကို ဖယ်ရှားပါမည်။ သင် implant ကိုဆက်လက်သုံးစွဲလိုလျှင် ထိုအချိန်မှာပင် နောက်တစ်ခုထည့်နိုင်သည် ။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – implant နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမက သင်၏လိင်မှုဘဝအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။ 
အမျိုးသမီးများစွာတို့တွင် တဖြည်းဖြည်းချင်း ရာသီနဲပြီး အကြိမ်ရေလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
ကလေးမွေးခြင်းကို ၃နှစ် – ၅ နှစ်ကြာထိန်းချုပ်ထားသည်
Premenstrual Syndrome (PMS) လက္ခဏာများ၊ စိတ်ကျရောဂါနှင့် endometriosisသားအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်
မကောင်းတဲ့အချက်များ – လူတိုင်းဟာ အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးများစွာအတွက်မူ ၎င်းတို့သည်ပြသနာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တွေ့ကြုံခံစားရပါက ၎င်းတို့သည် ပျောက်ကွယ်ကောင်းပျောက်ကွယ်သွားမည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဟော်မုန်းများသွင်းပေးနေသောကြောင့် ကျင့်သားကျဖို့ လအနည်းငယ်လိုနိုင်သည်။
အဖြစ်အများဆုံး တိုင်တန်းချက်များ :
ပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးဆင်းခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပထမ ၆ လမှ ၁၂ လအတွင်း (ဆိုလိုသည်မှာရာသီကာလများအကြား သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း (သို့) ရှည်ကြာပြီးများပြားသည့် ရာသီလာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အချို့အမျိုးသမီးများတွင် implant ထည့်ထားသည့်အချိန် တစ်လျှောက်လုံး ပုံမမှန်သွေးဆင်းနေသည်။ အချို့အမျိုးသမီးများတွင်ရာသီလုံးဝမလာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် implantကိုစဉ်းစားနေပါက ပုံမှန်မဟုတ်သောရာသီလာမှုများကို ခံနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ Implant အသုံးပြုသူများသည် ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်းထက် ရံဖန်ရံခါ (သို့) လစဉ်မဟုတ်ပဲသွေးဆင်းခြင်းပိုဖြစ်နိုင်သည်။
implant အပေါ်မှအရေပြားအရောင်ပြောင်းသွားခြင်း သို့မဟုတ်အမာရွတ်တင်ခြင်း
အကယ်၍ ခြောက်လကြာပြီးနောက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သင် ခံနိုင်သည်ထက်ပိုပြီးခံစားရသည်ဆိုလျှင်၊ နည်းလမ်းများပြောင်းပြီး ကာကွယ်ထားပါ။ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ နည်းလမ်းအသစ်ကိုချက်ချင်းစတင်ကာ သေချာစွာ ကာကွယ်ထားပါ။
သင့်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါကို မကြိုက်သေးဘူးလို့ခံစားရရင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေရှိပါတယ်။ သတိရလိုက်ပါ : အကယ်၍ နည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်ပြောင်းနေစဉ် ကာကွယ်ထားရန် သေချာပါစေ။ (ဒီဇိုင်နာ၊ ကွန်ဒုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပါ) – ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာနေတုန်းမှာ ကွန်ဒုံးတွေက ကာကွယ်မှုကောင်းကောင်းပေးပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ သင့်ရာသီစက်ဝန်းအတွင်း အက်စထရိုဂျင်ဟိုမုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသောနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့် ပို၍သင့်တော်ပါစေမည်။ ဆေးလုံး, ကပ်ခွာပြား ဒါမှမဟုတ် အဝိုင်းကွင်း ကိုစဉ်းစားပါ
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဟော်မုန်းပါသော IUD နှင့်ဟော်မုန်းမပါသော IUD
သွေးစက်ကျဆင်းတာကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
၎င်းသည်ပြင်ရန်ခက်ခဲသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့် implant သည် လအနည်းငယ်သာရှိသေးပါက ၎င်းသည် သူ့အလိုအလျောက် လျော့နည်း သို့မဟုတ် ပျောက်သွားနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အကယ်၍ သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းဟာအချိန်နှင့်အမျှ ကောင်းမွန်မလာပါက ကြိုမှန်းနိုင်သော ရာသီချိန်ကို သိနိုင်သည့် နည်းလမ်းများအတွက် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ယင်းတို့တွင် ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား ဒါမှမဟုတ် အဝိုင်းကွင်း တို့ပါဝင်သည်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်း
၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ ကိုတွေ့ပါ။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဟော်မုန်းများသည် အမြန် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သင့်သည်။ implantဖယ်ရှားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်စွမ်းမှာ နှောင့်နှေးနိုင်သည်။ မိန်းမအများစုမှာ implantကို ရပ်ပြီး မကြာမီ ကိုယ်ဝန်ရကြသည်။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်ဝန်မဆောင်လိုပါကသင်၏ implantကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် အခြားနည်းလမ်းတခုကိုချက်ချင်း စတင်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မူတည်၍ implant ဖယ်ရှားပြီးနောက် သင်၏ပုံမှန်ရာသီသို့ပြန်ရရန် ၂ လခန့်ကြာနိုင်သည်။ 
စိတ်ပြောင်းလဲလွယ်၊ စိတ်လေ သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုများခံစားရလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဟော်မုန်းများသည် ၆ လခန့်အကြာတွင် စတင်ပုံမှန်ဖြစ်လာမည်။
သင် implantထဲ့တာ ၆ လထက်နည်းပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါက ဖယ်ရှားပစ်ရန်မတောင်းဆိုမီ စောင့်ပါ။
သင် implantထဲ့ပြီး ၆ လထက်ကျော်ခဲ့လျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား အခြားနည်းလမ်းအတွက်ပြောဆိုပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ၆ လထက်ကျော်ခဲ့ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို မခံနိုင်ရှိပါက ကပ်ခွာပြား၊ ဆေးလုံး၊ အဝိုင်းကွင်း ကဲ့သို့ တာတိုခံ ဆေးပမာဏနဲသည်ကို စမ်းသုံးရန် စဉ်းစားပါ IUD နှစ်မျိုးမှတစ်မျိုးကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဟော်မုန်းပါသော IUD နှင့်ဟော်မုန်းမပါသော IUD၊ ကပ်ခွာပြား၊ ဆေးလုံး၊ အဝိုင်းကွင်း
မိမိကိုယ်ခန္ဓာတွင် အချိန်အတော်ကြာ ထည့်မထားလိုပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
သန္ဓေတားကိရိယာအားလုံးကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီး ရေရှည်အသုံးပြုရန် အတည်ပြုထားပါတယ်။ ၎င်းကို အချိန်ကြာကြာထားရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့် implant ကို ၃နှစ် မှ ၅ နှစ်အထိမေ့ထားနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းတွင်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်ဟူသောအတွေးကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသေးလျှင် အခြားရွေးချယ်ခွင့်များစွာရှိသည်။ ထိုးဆေး၊ ကပ်ခွာပြား ဆေးလုံး ဆိုလျှင်ရော?
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- ထိုးဆေး၊ ကပ်ခွာပြား၊ ဆေးလုံး
မိမိတွင်ပုံမှန်ရာသီမလာလျှင် ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်း မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
သင်၏ရာသီရပ်တန့်ထားခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်၊ အမျိုးသမီးများက၎င်းကို ကောင်းသောအရာအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်းသေချာစေရန် ပုံမှန်ရာသီလာခြင်းမှာ သင့်အတွက်အရေးကြီးသည်ဆိုလျှင် အဝိုင်းကွင်း ကပ်ခွာပြား ဆေးလုံး စသည့် ပုံမှန်လှည့်သုံးရသောနည်းလမ်းကို စမ်းချင်ပေလိမ့်မည်။
implantဖယ်ရှားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်စွမ်း နှောင့်နှေးနိုင်သည်။ မိန်းမအများစုမှာ implantကို ရပ်ပြီး မကြာမီ ကိုယ်ဝန်ရကြသည်။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်ဝန်မဆောင်လိုပါကသင်၏ implantကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် အခြားနည်းလမ်းတခုကိုချက်ချင်း စတင်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မူတည်၍ implant ဖယ်ရှားပြီးနောက် သင်၏ပုံမှန်ရာသီသို့ပြန်ရရန် ၂ လခန့်ကြာနိုင်သည်။